Wasiirka gaashaandhigga Turkiga oo sheegay in ay daafici doonaan Azerbaijan | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Wasiirka gaashaandhigga Turkiga oo sheegay in ay daafici doonaan Azerbaijan
Wasiirka difaaca Turkiga Hulusi Akar ayaa sheegay in ciidamada Turkiga iyo Russia ay si wadajir ah u difaaci doonaan xuquuqda qarannimo ee dalka Azerbaijan.
“Shaqadeena waxay xoogaysan doontaa marka xarunta howlgalka isku dhafka ah howlgasho, waxaan daafici doonaa xuquuqda walaalaheen Azerbaijan,” ayuu yiri wasiirka oo ka qeybgalay xaflad ciidan goor dambe oo Arbacadii ah.
Ciidamo Turkiga ayaa horaantii todobaadkan tagay dalka Azerbaijan si ay qeyb ugu noqdaan ciidanka nabad ilaalinta gobolka Nagorno-Karabakh, wefdiga wasiirka waxaa kamid ah taliyaha militiriga Turkiga iyo saraakiil kale.
Turkiga ayaa si weyn loogu xasuustaa taageeradii uu u muujiyay Azerbaijan intii uu socday dagaalkii u dhexeeyay labada dal Azerbaijan iyo Armenia oo ka dhacay gobolka Nagorno Karabakh.
Wasiirka gaashaandhigga Azerbaijan Zakir Hasanov ayaa sheegay in Turkiga uu markasta dhankooda yahay.
Horaantii bishan December, madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa sheegay in xarunta howlgalada isku dhafka ah laga sameyn doona magaalada qaddiimiga ah ee Aghdaam.
Azerbaijan iyo Armenia oo horey ugu tirsanaa Midowgii Sufiyeet ayaa 1991 dagaal ku dhex maray gobolka Nagorno Karabakh oo caalamku u aqoonsan yahay in uu ka tirsan yahay Azerbaijan, balse ay ku nool yihiin qowmiyad Armenia ah.
Bishii September 27 ee sanadkan ayaa mar kale labada dal ku dagaalameen gobolka, colaad socotay 44 maalin ka dib waxaa labada dhinac ku heshiiyeen in Armenia isaga baxdo gobolka isla markaana loo gacan geliyo ku dhowaad 30 sano ka dib Azerbaijan.
Wasiirka gaashaandhigga Turkiga oo sheegay in ay daafici doonaan Azerbaijan was last modified: December 31st, 2020 by Admin